Shiinaha Y nooca Slurry Madax Warshad iyo soosaarayaasha | Nortech
Muxuu Yahay Nooca Gawaarida Gawaarida?
Y nooca Gawaarida Gawaaridawuxuu u qaybsan yahay qaybo bidix iyo midig oo kursi dhexdooda ah. Kursiga waxaa lagu rakibay inta udhaxeysa labada waalka jirka, sidaa darteed kursiga si fudud ayaa loogu beddeli karaa .Gawaarida bidix iyo midig ee meydadka waxaa lagu bixiyaa naqshad joomatari, falanqaynta cunugga iyo software-ka naqshadeynta 3D ayaa loo isticmaalaa falanqaynta qulqulka ee jirka .
Wajiga shaabad ku xidha waalka waalka wawirka leh xagal cayiman oo u dhexeeya jirida iyo kanaalka ayaa leh xaglo cayiman oo leh marinka iyo kanaalka. Jirka waalka bidix iyo midig waa la kala saaray, kursiga waalka waa la dhex dhigay inta u dhexeysa labada meyd ee waalka, balka isku xira labada meyd ee waalka waxaa lagu badali karaa kursiga waalka, daloolka waalka waxaa ku qalabeysan nabaad-guurka iyo saxanka waardiye ka-hortagga , Furitaanka daqiiqada wiishka, jirka waalka ayaa laga ilaalin karaa nabaad guurka iyo daxalaysiga ee dhexdhexaadka ah, iyadoo leysku celceliyo sareysa iyo ka hortagga nabaad-guurka oo shaqeynaya. Nooca noocan ah slurry waalka badalkiisu ma beddelo jihada socodka.
Astaamaha ugu muhiimsan ee nooca NORTECH Y nooca Slurry Valve
Toos ah nooca, caabbinta socodka hooseeya.
Daabacada goobeed waxaa loo isticmaalaa inta udhaxeysa labada lammaaneed, si dusha sare ee shaabadu ugu xirmaan khadka si loo hubiyo kalsoonida isku xirnaanta iyo ka hortagga nabarrada.
Waxay leedahay iska caabin xirasho sare iyo nabaad guur.
Ku xir naqshadda qaabdhismeedka shaabbad beddelidda, hubi in walxaha daadadku uusan ka bixin warbaahinta, waxqabadka xirantu waa mid la isku halleyn karo, waana la beddeli karaa xirmooyinka internetka.
Shaabadda waalka waalka wuxuu qaataa garaaf jilicsan iyo garaaf jajaban si uu shaabadda u noqdo mid la isku halleyn karo
Faahfaahinta farsamada ee NORTECH Y nooca Slurry Valve
Waalka slurry si gaar ah loogu talagalay alumina oxide, macdanta, slurry metallurgical
Waalka slurry, waalka daadinta, waalka outlet hoose
Y nooca, nooca toosan, nooca xagalka
Qalabka dibedda, maqaarka gudaha
-29 ~ 425 ° C (waxay kuxirantahay walxaha la daadiyo)
Gacan-ku-qaadista / Qalabka gacanta / Qalabka Pneumatic / Qalabka korantada
Show Product: Y nooca slurry waalka
Waa maxay nooca Y slurry Valve loo isticmaalay?
Noocan ah Y nooca Gawaarida Gawaarida si ballaaran ayaa looga faa'iideysan Bacriminta, macdanta, metallurgy, alumina iyo warshadaha kale
Hore: Waxqabadka Sare Double balanbaalis balanbaalis nooca lug warshad Shiinaha
Xiga: 3 way waalka waalka
daadinta waalka banaanka
daadinta qalabka gudaha
waalka hoose flat
waalka isku xidhka tuubada
biibiile xiriir disc disc dibadda
biibiile iskuxira disc disc gudaha
waalka slurry china
Warshad slurry waalka
Nooca balanbaalis Balanbaalis Madax lugta